Xildhibaanada Galmudug oo laba Qaybood u kale Jabay | Hubsad News
Xildhibaanada Galmudug oo laba Qaybood u kale Jabay
Guddigii loo saaray in ay maamulaan doorashada madaxweynaha ayaa ku kala booday fadhigii ugu horeeyay ee ay yeesheen, waxaana dhacday in 5 ka mid ah xildhibaanada guddiga ay banaanka oga baxeen shirka, halka guddiga intii hartay oo aqlabiyadda ahayd ay doorteen guddoomiyaha guddiga.
Xildhibaanada cabashada soo gudbiyay ayaa ka mid ahaa kuwii ay soo xuleen Ahlu Sunna Wal Jamaaca , waxayna sheegeen in la baalmaray habraacii saxda ahaa.
Guddiga doorashada ayaa markii dambe soo saaray jadwalka doorashada , waxayna sheegeen in madaxweynaha la dooran doono 3-ka bishan Janaayo.
Musharixiin isbahaysi samaystay ayaa horey u codsaday in doorashada dib loogu dhigo muddo si ay u helaan waqti ay ololaha doorashada ku galaan.
Image captionGuddiga doorashooyinka ee Galmudug oo shiraya
Image captionQaar kamid ah musharaxiinta madaxweynaha
Qabashada doorashada madaxweynaha Galmudug iyo ku xigeenkiisa ayaa lagu wadaa in ay dhacdo 30-ka bishan Janaayo.